Vanyori veIreland kupemberera Saint Patrick. Akasarudzwa mitsara | Zvazvino Zvinyorwa
Ireland pemberera nhasi Patrick, bato rayo rine mukurumbira uye repasirese, iro rinotenderera pasirese, nyika ikozvino yakasununguka kubva kumuvengi asingaonekwe. Saka ndinobatana nemhemberero- uye zvikumbiro zviri kunyatso kuitirwa musande kuti akwanise ruoko- pamwe nekuumbwa mitsara yevamwe vevanyori vanonyanya kukosha ChiIrish. Kubva ku classics saJames Joyce, Oscar Wilde kana George Bernard Shaw, achipfuura naBram Stoker, Samueri Beckett kana Iris Murdoch. Uye kupedzisa vakawanda venguva imwe saJohn Banville uye manzwi matsva saTana French kana Marian Keyes.
Chido chinotikurudzira kutora, kuenda kune chimwe chinhu.
Zvikanganiso ndizvo zvikumbaridzo zvekutsvaga.
Nhamo yekuchembera haisi yekuti wakura, asi kuti uri mudiki.
Zvishoma zvakajairika munyika ino kurarama. Vanhu vazhinji varipo, ndizvozvo chete.
Vanhu ndivo chete mhuka dzandinotya zvachose uye zvechokwadi.
Moyo wemuIrishman hausi chimwe chinhu kunze kwekufungidzira kwake.
Mabhuku ndicho chakanakisa chinhu mushure meMwari.
Kana kusingaperi kuchinzwisiswa, kwete kwenguva isingaperi yenguva, asi kusavapo kwenguva, iye anogara mune ino anorarama nekusingaperi.
Kunyora kwakafanana nekuroora. Mumwe haafanire kuzvipira kusvikira mumwe ashamiswa nerombo rake.
Godo hachisi chinhu kunze kwekunzwa ndega kurwisa kunyemwerera vavengi.
Ireland inyika huru kufa kana kuroora.
Izvo zvakapfuura zvinorova mukati mangu kunge wechipiri moyo.
Mabhuku ndeimwe yezvigadzirwa zvikuru zvevanhu uye imwe yemhando dzakanakisa dzehunyanzvi.
Kururamisa kwezvematongerwo enyika inzvimbo yemugodhi.
Chii chinonzi hupenyu asi nguva pfupi yemufaro yakasungirirwa pamutsipa wekupererwa?
Ndayambuka makungwa enguva kukuwana.
Zviri nenzira iyi yekuti ndangariro dzinoita majee adzo, zvirinani kana zvakaipa, kukonzera mafaro kana kurwadziwa, kugara zvakanaka kana kushungurudzika. Izvi ndizvo zvinoita kuti hupenyu hutapire uye hwava panguva imwe chete, uye izvo zvatakapihwa zvinove zvekusingaperi.
Chivi chega chitadzo chekuzvarwa.
Iwe uri pasi pano. Iko hakuna mushonga weizvozvo.
Waini inopinda mumuromo uye rudo runopinda mumaziso; izvi ndizvo zvese zvatinoziva chaizvo tisati takwegura nekufa. Saka ndinounza girazi kumuromo wangu, uye ndinokutarisa, nekugomera.
Tsika zvinyoro nyoro nekuti urikutsika hope dzangu.
Baba vangu vakambondiudza kuti chinhu chakakosha murume kuziva ndechekuti sei achifa.
Vanhu vaunoziva sevachiri kuyaruka, ndivo vakaona vhudzi rako rakapusa uye zvinhu zvinonyadzisa zvikuru zvawakamboita, uye vachiri nehanya newe pamusoro pezvese izvo - ivo havangadzoreke, unoziva?
Chimwe chezvinhu chandinofunga kuti chikoro chekunyora chinofanira kunge chiri kuodza moyo vanhu kubva pamanyorero avanonyora, uye ini ndinozvitenda chaizvo uye ndinozvitaura.
Ini ndinotenda kuti mune chero chizvarwa uye mune chero nyika kune vashoma vashoma vevanyori vakanaka. Pamwe mumwe kana vaviri muchizvarwa changu, uye handifunge kuti kosi dzekunyora dzekugadzira dzichasimudzira kubuda kwemanzwi iwayo, kana kuvadzivirira kuti vasabude.
Musana wako igungwa rekumabvazuva rakasimba uye maoko ako nemakumbo zvinopfuura kupfuura makomo ako zvishoma nezvishoma.
Ivhu ratakashandisa nzeve dzedu kwenguva yakareba rakasviba kana rakaoma, uye mukati maro munoedzwa neyakaipa mashura. Chitsuwa chedu chizere nemisindo isina kugadzikana.
Rudo rweutsinye, rudo rusina musoro rwanga rwapinda muhupenyu hwangu. Rudo runoda zvibayiro. Uye muzvibayiro ropa rinomhanya.
Iwe uchanditonga ndine hutsinye uye kuzvida, kuzvida zvakanyanya, asi rangarira kuti rudo runogara rwakadaro. Iyo yakanyanya kukura chishuwo, ndipo pahunowedzera kuzvifunga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Vanyori veIreland kupemberera Saint Patrick. Mitsara yakasarudzwa
Les Quintero akadaro
Mutsara wekuti, "Ndayambuka makungwa enguva kuti ndikutsvage," hausi naBram Stoker, hauonekwe munoverengeka. NdiFrancis Ford Coppola yemuvhi.
Pindura Les Quintero
Mitambo yeCalderón de la Barca